ဆန္ဒမဲအတွက်အဖြေရှာကြည်.ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဆန္ဒမဲအတွက်အဖြေရှာကြည်.ခြင်း
- june moe sat
Posted by june moe sat on Oct 31, 2010 in News |3comments
ရွးကောက်ပွဲကြီးလဲ တဖြေးဖြေးနီးကပ်လို.လာပါပြီ ။ ။ ဘယ်ပါတီကိုမဲထည်.ရမလဲ ယခုစာမရေးခင်အထိ ရေရေရာရာ ကိုယ.်ဘာသာ စဉ်းစားအဖြေရှာလို.မရခဲ့ .. TV ၊ သတင်းစားများမှ မဲဆွယ်ဟောပြောမှု များကို တတ်အားသရွေ. နားထောင်ဖတ်ရှု လေ့ လာခဲ့သည် ။ သို.သော် မည်.သည်. party ကို ထောက်ခံမှုပေး နိုင်ရန်ခိုင် လုံ သည်. အကြောင်းပြချက် ရှိ သည်. မဲဆွယ် စည်းရုံး ချက်နှင့်Party ကို မတွေ. ရှိမိ ။ တခါ တခါ ရုပ်မြင် သံကြား တွင်ဟော ပြော ကြသူ များ အိပ်ငိုက်ပြီး ပြော နေကြ လားဟုတောင်ထင်မိသည် ။ ။ ဒါနဲ. မည်. သည်. အရာ ကိုစိတ်ပျက်မိမှန်းမသိ စိတ်ပျက်မိသေး ဧ်။ ကိုယ်နိုင်ငံ ဧ်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ နေသော အခြေအနေကို စိတ်ပျက် မိခြင်း လော ရေရေရာရာ ဆုံးဖြတ်ချက် မချ နိုင်သော ကိုယ့်အခြေအနေကို စိတ်ပျက်မိခြင်းလော ။ စိတ်တော့ စိတ်ပျက်နေသည်မှာ အသေ အချာပင် ။ နိုင်ငံအတွက် ဒီလောက် အရေးကြီး သော အဆုံး အဖြတ်အတွက် တနေရာမှ ၀င်ရောက် ဆန္ဒ မဲ ပေး ရမည်. သူ ယခုအချိန်ထိရေရေရာ ရာ မသိ ။ ။
ဒါနဲ. မနေ.ညတွင် The Voice ဂျာနယ်ကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုမိ ဧ်။ ။ ကိုယ် စား လောင်း များနှင့် interview အများစု ပါဧ်။ ။ ကြံခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ် စား လောင်း ၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ် စား လောင်း ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်လောင်း ။
အဲဒီမှာမှ မှော်ဘီ ၊ တိုက်ကြီး ၊ လှည်းကူးမဲဆန္ဒနယ်မှ NDF ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ပြောကြားသွား သော စကားများအား တော်တော်လေးသဘောကြမိဧ်။ ။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ မူဝါဒတွေ ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ရေးတွေကို စွန်.လွှတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို လက်တွေ. ကျကျ ရပ်တည်မယ် ၊ လုပ်ပိုင်ခွင်.ပေးထားတဲ့ အခြေနေကနေလုပ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားမယ် ။ အနဲဆုံး ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်လိုပဲ အသားသေနေတဲ့ နိုင်လောက်တဲ့ party ရှိနေပြီးသား ရှိနေရှိနေ အနဲ ဆုံးတော့ နောင်တက်လာမယ့် အစိုးရကို check and balance လုပ်နိုင်မယ် ။ အစိုးရ စီမံခန်.ခွဲမှုမှာယွင်းမှုရှိနေရင် တရားဝင် ဝေဖန်ပြောဆိုနိုင် မယ် ဟု ပြောကြားသွားဧ်။ နောက်ဆုံး NDF တွင် ရ ယူလို သူ များမပါ ပဲ ၊ ပေးဆပ် သူ များနှင့် ဖွဲ.စည်း ထား သည်ဟုကောက်ချက်ချမိလိုက်ဧ်။ ။ ထိုပါတီ ကို သာမဲထည်. မည်ဟု ဆုံး ဖြတ်ချက် ချမိလိုက်ဧ်။ ။ ဘာပဲ ပြောပြော ယခု ရွေးကောက်ပွဲသည် ပြည်သူတို.ဧ်။ ဆန္ဒနှင့်တထပ်ထည်းကျသည်. အဖြေမျိုးကို ထုတ်ပေးနိုင်မှ ထုပ်ပေးနိုင်မည် ။ ။ သို.သော် စိတ်းကူးယဉ်ခွင်. တော့ ရရှိသွားမည်. အခြေအနေပေ တည်း ။ ။
ပြည်ထောင်စုကြီး အမှန်ပင် ကျန်းမားကြံခိုင်အောင် ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလျှက် ။ ။
၀န်ခံချက် ။ ။ ကျမသည် ဘယ်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ပါ ။ ပြည်သူထဲမှပြည်သူသာ
About june moe sat
june moe sat has written 1 post in this Website..
View all posts by june moe sat →
ဩော်…မဲထည့်တော့မယ်ပေါ့။ အသက်ငယ်သေးတယ်ထင်တယ် .ကျွန်တော်ကတော့ ၉၀ခုနစ်ကထည့်ပြီးသွားပြီ တခါဘဲအလိမ်ခံမယ် နစ်ခါတော့မရဘူး ။ခုအစိုးရ နအဖ က နိုင်တဲပါတီကို ဘယ်တော့လွဲမယ်ဆိုတာ မပြောပါဘူး သူမကြိုက်ရင် အရင်လိုဘဲ ၂၀နစ်လောက် အချိန်ဆွဲမှာပါ ။အဲဒီတော့ပင်ပန်းပါတယ် မဲထည့်မနေပါနဲတော့ဗျာ။
အင်း… ရွဲကုန်သည်ဇာတ်ထဲက မင်းသားကြီး အင်္လကာကျော်စွာ ရွေမန်းတင်မောင်ရဲ့ သီချင်းအသံ ကိုသာ ကြားရောင်နေမိပြန်ပါတယ်..။ (အဲဒီသီချင်းကို မီလိုက်တဲ့သူတွေက ဆိုလို့သာ ကြည့်ကြပါတော့နော်..)
ပြည်သူလူထုကို နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရ (စစ်တပ်ကခွစီးထားတဲ့အဖွဲ့) ကို စောင့်ကြည့်ထိမ်းကျောင်းတာတို့၊ ဝေဖန်လိုက်မယ်တို့ ပြောနေတာကတော့ ကုလသမဂ်ဂမှာခေါင်းပေါင်းနဲ့လူပြက်ခေါင်းပြောသွားတဲ့ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ထောင်ထ်ဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဆိုတာကြားတောင်မကြားဘူးဆိူတဲ့ကမ္ဘာကျော်ပြက်လုံးလိုလူရယ်စရာပါဘဲ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးကမရေရာဘူလို့လဲဝန်ခံတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်တာပါတဲ့။ကျုပ်တို့ပြည်သူတရပ်လုံးကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါတ်သက်ရင်ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်မှောက်ဘို့စိတ်အားသန်နေတာကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူး။လာပြီးအာဖျံကွီးမနေနဲ့။ စစ်အစိုးရ၇ဲ့ဒလန်တွေလိမ်ညာတာတွေကိုကျုပ်တို့သိလိုက်တာမှအွံတှိုပြီးပါးစပ်ဟကြည့်ရင်အံသွားတွေတောင်မရှိတော့ဘူး။ ဝါး ဟားဟားဟား။